Ingabe i-Twitter ifile؟ سیشه چا.
1 I-1 Okuyisisekelo KuDashibhodi elliyaiya-Twitter
2.1 I- بافر (فریمیوم)
2.3 Ukuthunyelwa kokuthunyelwe (مهاله)
3 I-3 Qalisa idatha ye-Twitter usebenzisa i-Excel
4 I-4 Siyini isikolo sakho se-Twitter?
5 نگاپزو کواخو
I-1 Okuyisisekelo KuDashibhodi elliyaiya-Twitter
Kunolwazi oluningi ongaluthola kudeshibhodi، njengokubuka، izinga lokuzibandakanya، ukuchofoza kwezixhumanisi، njll Kodwa، ngaphambi kwalokho، udinga ukuqonda incazelo yemetrikhi ngayinye idwaza yakho ibe nenjong.
Uma umkhankaso wakho we-Twitter ukwandisa okuvelayo، kufanele ubheke leyo metric ethile futhi uthole indlela engcono kakhulu yokuthuthukisa okuvelayo. Bheka iso metric ngayinye bese uqhathanisa imininingwane nezinyanga ezedlule. Uyokwazi uma wenza izinto kahle ngoba uzobona ukwana okuqhubekayo.
مانژ ، hlolisisa imininingwane yosuku ngalunye ، uzothola imilayezo efihliwe.
Nakhu ukuthi imininingwane you-tweet ethile ibukeka kanjani:
تحلیلی Uma i-Twitter iyingxenye yolwazi olwedlule ، ake sikuzame namuhla. Gxila ku-metric futhi uthuthuke lapho. Kungenza umthelela omuhle ngokuhamba kwesikhathi.
Ngo-27 May، 2015، i-Twitter ithuthukise ukuhlaziywa kwayo Abalaleli Ukuqonda. Lesi sici sinokuqhekeka okuningana kwemininingwane yokuthakaselwa kwabalandeli bakho okufana ne-Demographics، Indlela Yokuphila، I-Mobile Footprint، njll.
Lokhu kuhle ebhizinisini، ngoba manje uyakwazi ukuqhathanisa abalandeli be-organical nabasebenzisi be-Twitter. Okwamanje ، abasebenzisi base-america kuphela abalandelwayo. Ungenza isifundo sokuqhathanisa phakathi kwabalandeli bakho nabanye abasebenzisi be-Twitter.
ampulatifomu نازی we-3 engathola ukuthi kufanelekile futhi kulula kubaqalayo ukusebenzisa.
I- بافر (فریمیوم)
isikhumbulo sesikhana iyithuluzi lokuphathwa kwezindaba zenhlalo ethandwayo. Uvunyelwe ukuhlela ama-tweets nganoma yisiphi isikhathi bese uhlela amashejuli ahlukene nsuku zonke. Lokhu kubalulekile uma usebenzisa imikhankaso ellene.
I-Ritetag iyithuluzi lokuxhumana nabantu eligxile ku-hashtag. Iza nokufakwa kombala we-hashtag، ukuhlaziywa kokubandakanya okusheshayo nokuhlolwa okuphelele kokuthunyelwe. I-Ritetag ihlaziya i-hashtag njalo، evumela ukuthi ukwandise ukufinyelela kwakho ngaphambi kokuthumela i-tweet.
Izibonelo zesibonelo #hrowthhacking – جستجوی توییتر.
Ukuthunyelwa kokuthunyelwe (مهاله)
Ngaphandle kwalokho، i-Postchup ikunika indawo ye-geo-indawo yabantu abakutshele. کوشوکا لافو ، اونگبا نوکوبوکا اوکوپلله کوردینداوو زاخو ززیلاللی.
I-3 Qalisa idatha ye-Twitter usebenzisa i-Excel
Ngaphandle kwedatha ye-analytic oyithola ku-platform ye-Twitter yomphakathi kanye namathuluzi wezokuxhumana، ungahlala uhlaziya ngokwakho.
Ngokuvamile ، labo abathanda ukwenza izinto ngokwabo bazokwazi ukuqonda kangcono le datha. Lokhu akuwona umsebenzi onzima. صفحه گسترده Udinga nje ukuthekelisa idatha kusuka ku-Twitter ukuhlaziya kanye ne-Excel.
نازی ezinye izibalo ezilula engiziphumayo ngisebenzisa idatha kusuka Ngaphambi kokuba ugxume ekuhlaziyeni، kufanele uqale wazi ukuthi ufuna ukutholakala yini kudatha.
Ngaphandle komgomo ocacile، idatha yakho ye-twitter ingenye ispredishithi enekholomu nezinhlamvu. نگیفونا وکواوی:
I-1 Vula idatha ye-analytics ye-Twitter (ifomethi ye-csv) ku-Excel
I-3 Sebenzisa umsebenzi we-Excel LEFT ukuphuma nosuku kukholomu entsha
سمت چپ ([@ isikhathi] ، 10) ukuphuma nosuku
I-4 Sebenzisa umsebenzi we-Excel TEXT ukuguqula usuku ube yiviki kukholomu entsha
متن (E2, "Ddd") ukubuyela ngosuku lweviki
I-5 Sebenzisa umsebenzi we-Excel IF ukuze ukhethe i-standard evamile noma uphendule tweet kukholomu entsha
Uma i-LEFT ([@ umbhalo we-Tweet] ، i-1 = = "@", "محرک", "استاندارد")
I-6 Uma unayo yonke idatha ilungile، hlaziya idatha yakho usebenzisa ithebula le-pivot noma igrafu ye-pivot
Kusobala ukuthi i-standard ejwayelekile ibonakala kahle uma iqhathaniswa nokuphendula صدای جیر جیر.
توییتر eushwayilelwa kusuka kwi-tweet ejwayelekile kufana ne-2x yempendulo yempendulo.
Izinga lokuzibandakanya kusuka kumpendulo tweet liphathelene ne-3x ephakeme uma kuqhathaniswa nej standard ejwayelekile.
I-4 Siyini isikolo sakho se-Twitter?
Ungahlala amahora ambalwa ngosuku، ukusebenzisana nabalandeli bakho nokubheka i-هشتگ. Ungabuza ، uba yini umphumela?
Ithuluzi linesidashibhodi esisebenzayo esingakusiza ukulandelela amagama angukhiye ahambisanayo ngesikhathi sangempela. Lokhu kungasetshenziselwa ukuxhumana nabalaleli bakho (abangazange bakhulume isibambo sakho) noma bazi ukuthi abancintisana nabo benza kanjani. Ngaphandle kokuqapha kweBrikhi، ithuluzi lingasetshenziswa futhi ukukhomba abathonya abathintekayo nabachwepheshe abahlobene nesizinda sakho.
I-Followerwonk umkhiqizo owenziwe yiMoz. Izokunika idatha mayelana nabalandeli bakho be-Twitter، طاقچه indawo. استفاده از بنزوایزو ، مرزبان ungene ngemvume usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Twitter. Ikhululekile ukuyisebenzisa.
I-Followerwonk isebenzisa Igunya lomphakathi ukukala ithonya le-Twitter. Igunya lezenhlalo lilinganiswa ngokususelwa kuma-retweets. Ukuze uthuthukise isikolo، kufanele ukhulise ukubandakanyeka kwe-Twitter.
Uma ungakabi طرفدار توییتر ، hlola phezulu ukusilandelaWHSRnet.
I-Twitter yiyona yesikhulumi esikhulu sezindaba ze-4 esikhulu senhlalo، futhi ngakho ibhizinisi lakho lisebenza kangcono.